Rano Avanafil powdy (330784-47-9) hplc≥98% | AOSraw volo firaisana
/ Products / Hormonal Enhancing Sex / Fampiasan'ny lehilahy / Avanafil vovoka
4.00 avy amin'ny 5 miankina amin'ny 3 mpanjifa naoty
SKU: 330784-47-9. Sokajy: Fampiasan'ny lehilahy, Hormonal Enhancing Sex
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-mampiasa sy ny famokarana maimaim-poana avy amin'ny gram amin'ny filamatry ny varotra Avanafil (330784-47-9), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Avanafil vovoka miasa amin'ny fampitomboana ny rà mandriaka mankany amin'ny penis mandritra ny fanentanana ara-nofo. Io fitomboan'ny fitomboan'ny rà dia mety hiteraka fananganana. Ny tombony avy amin'ny avanafil dia ny fanombohana haingana ny fihetsika raha ampitahaina amin'ny hormones fampiroboroboana ny fanaovana firaisana ara-nofo hafa. Mihamitombo haingana izy io, ary mahatratra haingana be ao anatin'ny 30-45 minitra.
Avanafil video vidéo
Rohana Avanafil karazana fototra karazana
Name: Avanafil vovoka
Formula Molecular: C23H26ClN7O3
Meny fitetezana 483.95
Rano Avanafil sikla
Famaritana an-tsoratra: Rano Avanafil
Avanafil vovoka ho an'ny fiterahana Erectile
Satria ny Rohan Avanafil no fanampim-panazavana farany amin'ny arsenal momba ny fanafody dysfunction erectile, aleo jerentsika akaiky kokoa izany alohan'ny hanaovana fampitahana amin'ny zava-mahadomelina hafa. Tao anatin'ny fisedrana ara-pahasalamana, ny total 77% ny lehilahy manana fatiantoka avo lenta avo lenta izay naka ny Rohan Avanafil dia nahavita fananganana raha oharina amin'ny 54% ny lehilahy naka toerana. Ao amin'ny lehilahy voan'ny diabeta ambaratonga malemy, ny 63% dia nanatontosa fananganana taorian'ny fanondranana Rohan Avanafil raha ampitahaina amin'ny 42% izay naka toerana.
Andeha hojerentsika ny vokatr'ilay fitsapana nandritra ny herinandro 12-n'ny Phase III. Ny totalin'ny lehilahy 646 dia nomena tsindraindray haka 50, 100, na 200 mg of Avanafil minitra 30 minitra talohan'ny nanaovana ny fanaovana firaisana ara-nofo. Tsy misy famerana ny fampiasana sakafo na alikaola. Tamin'ny fanandramana ara-pananahana 300 natao nandritra ny fianarana, 64% ho 71% dia nahomby teo amin'ny lehilahy izay nandray ny vovobony Rana Avanafil raha ampitahaina amin'ny 27% eo amin'ny lehilahy izay naka toerana. Vaovao tsara hafa: 59% ho 83% amin'ny fanandraman'ny 80 amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo dia nahavita mihoatra ny ora 6 taorian'ny niterahany ny vovobony Rana Avanafil raha ampitahaina amin'ny 25% fanandramana nahomby tamin'ny lehilahy izay naka toerana. Tao amin'ny lehilahy sasany dia niasa tao anatin'ny minitra 15 ny serfa Avanafil. (Goldstein 2012)
Raha ny marina, zavatra iray mety ahafahana manavaka ny vovo-dronono Rana Avanafil avy amin'ireo medikaly hafa efatra hafa dia haingana be izany. Dr. Wayne Hellstrom, profesora urolojia ao amin'ny Oniversite Tulane University any New Orleans, dia nanambara tao amin'ny lahatsoratra tao amin'ny lahatsoratra navoakan'i Reuters fa "ny mety ho fihetsika haingana indrindra amin'ny volo", araka ny fijerin'ny dokotera Raw Avanafil, dia afaka manohy haingana toy ny 15 minitra. Na dia izany aza, nisy ny tatitra momba ny pilina Cialis miasa amin'ny manodidina ny minitra 15 koa.
Inona no atao hoe dosage ny vovoka Avanafil
Avanafil ny vilany dia tonga toy ny takelaka takiana amin'ny vava. Ho an'ny lehilahy mitondra ny dosage 100- mg na 200-mg, ny Rana Avanafil dia matetika entina miaraka amin'ny sakafo na tsy misy sakafo raha ilaina, mikasika ny 15 minitra alohan'ny fikarakarana ara-pananahana, tsy mihoatra ny indray mandeha isan'andro.
Ho an'ny lehilahy maka ny dosie 50-mg, ny Pulverin'ny Avanafil dia matetika raisina na tsy misy sakafo raha ilaina, mikasika ny 30 minitra mialoha ny fanaovana firaisana ara-nofo. Aza maka ny Rohan Avanafil matetika kokoa noho ny indray mandeha amin'ny ora 24.
Tsy azo atao ny fampiasana ankizy.
Ahoana ny asan'ny Rohan Avanafil
Ny Rohan Avanafil dia ao anatin'ny kilasy iray misy fanafody antsoina hoe phosphodiesterase (PDE). It is used to treat disorder erectile (ED: impotence; inability to get or keep up in men). Ity vokatra fanamafisana ny lahy ity dia nahazo ny anarany avy amin'ny zavatra tena manan-danja izay manampy amin'ny famoahana ny ra ao amin'ny vatana araka ny fomba mahazatra. Misy fitaovana hafa izay mahatonga an'i Raw Avanafil tsiranoka mahomby fa tsy manana fiantraikany be loatra sy ny vokatra izay tsy maintsy atolotra azy.
Izy io dia miasa amin'ny fampitomboana ny rà mandriaka mankany amin'ny penis during sexual stimulation. Io fitomboan'ny fitomboan'ny rà dia mety hiteraka fananganana. Rohana Avanafil tsy manasitrana ny dysfunction erectile na mampitombo ny faniriana hanao firaisana. Rano Avanafil ny poezia dia tsy manakana ny vohoka na ny fihanaky ny aretina azo avy amin'ny firaisana toy ny virosy virtoaly (VIH).
Ny Rohan Avanafil Rohana dia medikaly am-bava izay ampiasaina amin'ny fitsaboana tsy fahampian-tsakafo (ny tsy fahafahana manatontosa na ny mitazona penisé erectile), fantatra ihany koa amin'ny hoe dysfunile erectile (ED). There is a drug called phosphodiesterase inhibitors that includes tadalafil (Levitra Cialis), sildenafil (Viagra) and vardenafil (Levitra). Ny fananganana ny penis dia vokatry ny famenoana ny penisina amin'ny ra. Ny famonoana dia mitranga satria mitombo ny tahan'ny rà mitondra mankany amin'ny penis ary mampitombo ny rà amin'ny penis, ary amin'ny fotoana iray dia mihena ny tahan-dra izay maka ra avy amin'ny penis ny habeny ary manala kely ny rà avy amin'ny penis . Ny fanentanana ara-nofo izay mitarika amin'ny fananganana dia miteraka ny famokarana sy ny famoahana ny oksidia azota ao amin'ny penis. Ny oksika azony dia miteraka enzyme, guanylate cyclase, mba hamokarana guonosine monophosphate cyclone (cGMP). Ny cGMP no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampitomboana sy ny fihenam-bidy ny haben'ny rà mandriaka mitondra ny ra mankany amin'ny sy ny penis, ary mahatonga ny fananganana. Rehefa rava ny enzyme cGMP, ny phosphodiesterase-5, ny vatana dia miverina amin'ny habeny ara-dalàna, mandao ny penis ny ra, ary mifarana ny fananganana. Ny Rohana Avanafil Rohana dia manakana ny phosphodiesterase-5 tsy handrava ny cGMP ka mitoetra manodidina ny cGMP. Ny faharetan'ny cGMP dia mitarika ho amin'ny fihazakazahana bebe kokoa ny penis amin'ny rà. Ny Rohan Avanafil Rana dia nankatoavin'ny FDA tamin'ny Aprily 2012.
Fiahiana mifandraika amin'ny fiantraikany ratsy:
• Fanavakavahana amin'ny endri-javatra: Mety hiteraka olana ara-doko amin'ny fanavakavahana ny loko. Mampiasà fampitandremana ho an'ny marary miaraka amin'ny pentina retinitis; Ny vitsy an'isa dia manana aretina avy amin'ny fototarazan'ny phosphodiesterase (tsy misy azo antoka).
• Lozam-pihetseham-po: Mihena ny fihenan'ny tampoka na ny fahaverezan'ny fihainoana; Ny fihenan'ny fihainoana dia mety miaraka amin'ny tinnitus sy ny fitabatabana. Ny fifandraisana mivantana eo amin'ny fitsaboana sy ny fihenan'ny fihenam-bidy dia tsy voafaritra.
• Fihetseham-po: Mety hitranga ny fihenan'ny tsiranoka noho ny vokatra vasililator; Mampiasà fampitandremana amin'ny marary amin'ny fanesorana ny fivoahana avy any ivelany (stenosis aortique na kardiomyopathie hypertrophic); dia mety ho mora kokoa amin'ny fihetsiketsehana mihetsiketsika. Ny fampiasana miaraka amin'ny fitsaboana amin'ny alfa-adrenergic dia mety miteraka fitsaboana aretin-tsaina; Ny marary dia tokony ho mendri-ponenana alohan'ny hanombohana fitsaboana amin'ny doka faran'izay kely. Ny marary dia tokony hialana na hamerana ny fihinanana ethanôl miavaka izay mety hampitombo ny mety ho fisian'ny hypotension symptomatika.
• Priapism: fananganana fanaintainana> ora 6 nandritra ny fotoana maharitra dia voatatitra (mahalana). Ampianaro ny marary hikatsaka ny fitsaboana tsy tapaka raha mbola mitohy ny fananganana> ora 4. Ampiasao amim-pahamalinana amin'ny marary izay misy toe-javatra izay mety hanohintohina azy ireo ho amin'ny priapism (areti-mifindra anemia, myeloma marobe, leukemia).
Rana Avanafil vovoka Marketing
Manana fiantraikany amin'ny fihenan-tsakafo ny Rohan Avanafil
Ny Rohan Avanafil dia mety hiteraka vokatra hafa. Lazao amin'ny dokotera fa misy marary na soritr'aretina ireo soritr'aretina ireo:
Ny voka-dratsiny sasany dia mety ho matotra. Raha sendra misy soritr'aretina ianao, antsoy avy hatrany ny dokotera na mahazo fitsaboana tsy mila fitsaboana:
fananganana maharitra mihoatra ny ora 4
Fahavitan'ny fahitana tampoka amin'ny maso iray na roa (jereo eto ambany ho an'ny fampahalalana bebe kokoa)
Ny fihenan'ny tampoka (jereo eto ambany ho an'ny fampahalalana bebe kokoa)
miantso amin'ny sofina
Ny Rohana Avanafil dia mety hiteraka vokatra hafa. Antsoy ny dokotera raha manana olana tsy mahazatra ianao rehefa mandray an'io fanafody io.
Ahoana ny hividianana vovoka Avanafil avy any AASraw
AASraw manome ny fahadiovana 99% Avanafil mena ny hoditra momba ny hormone fampiroboroboana ny firaisana ara-nofo amin'ny fampiasana rongony.
Vardenafil HCL powder VS Avanafil powder